Mgbochi nke mkpịsị aka, Igbugbe ihe nkedo na-egbuke egbuke, Eyeglass Lens Coatings Manufacturer na China
Nkọwa:Mgbochi aka mkpịsị aka,Ogbugbu Ịgba Glass,Eyeglass Lens Coatings,Anya nlekota anya,,
Home > Ngwaahịa > Ihe Ntuchi Ntuchi > Nano Na-ekpocha Maka Anya Anya
Ngwaahịa nke Nano Na-ekpocha Maka Anya Anya , anyị bụ ndị na-emepụta ọkachamara si China, Mgbochi aka mkpịsị aka , Ogbugbu Ịgba Glass suppliers / factory, wholesale high-quality products of Eyeglass Lens Coatings R & D and manufacturing, anyị nwere ọrụ zuru ezu mgbe-ahịa na nkwado teknụzụ. Le anya n'ihu na nkwado gị!
Ọdịdị Dị Elu Dị Mgbochi Mgbochi Mkpịsị Nkịtị Maka Ihe Anya  Kpọtụrụ ugbu a
Liquid Agbanwe Agbanwe Agbanwe Maka Anya Anya Anya  Kpọtụrụ ugbu a
Ezi arụmọrụ maka Optical lens  Kpọtụrụ ugbu a
Ihe nkwekọrịta nke mkpuchi ihe na-egbochi ihe mgbochi anya  Kpọtụrụ ugbu a
Ihe na-egbochi ihe mgbochi maka ihe mgbochi anya  Kpọtụrụ ugbu a
Ihu igwe na-eguzogide ọgwụ maka ihe mgbochi anya  Kpọtụrụ ugbu a
Ihe mkpuchi ihu na-abụghị ndị na-adịghị ọcha maka ihe mgbochi anya  Kpọtụrụ ugbu a
Enweghi oghere AF maka ihe mgbochi anya  Kpọtụrụ ugbu a
Mpempe mmiri na-ekpuchi AF maka ihe mgbochi anya  Kpọtụrụ ugbu a
Nano mkpuchi na-eguzogide ọgwụ maka ihe mgbochi anya  Kpọtụrụ ugbu a
Ọdịdị Dị Elu Dị Mgbochi Mgbochi Mkpịsị Nkịtị Maka Ihe Anya
Liquid Agbanwe Agbanwe Agbanwe Maka Anya Anya Anya [ Anti Fingerprint Ngwọta nkọwapụta] Ụdị: Mmiri mmiri mmiri na-achaghị acha ma ọ bụ nke na-acha odo odo bụ AF ụdị ụdị fluorocarbon, nke a kwadebere ya na ụdị fluorosilicon Debe. Mgbochi mkpịsị ụkwụ...
Liquid Agbanwe Agbanwe Agbanwe Maka Anya Anya Anya
Ezi arụmọrụ maka Optical lens
Ezi arụmọrụ maka Optical lens [ Anti Fingerprint Ngwọta nkọwapụta] Ụdị: Mmiri mmiri mmiri na-achaghị acha ma ọ bụ nke na-acha odo odo bụ AF ụdị ụdị fluorocarbon, nke a kwadebere ya na ụdị fluorosilicon Debe. Mgbochi mkpịsị ụkwụ na-enwe mmetụta dị...
Ihe nkwekọrịta nke mkpuchi ihe na-egbochi ihe mgbochi anya
Ihe nkwekọrịta nke mkpuchi ihe na-egbochi ihe mgbochi anya [ Anti Fingerprint Ngwọta nkọwapụta] Ụdị: Mmiri mmiri mmiri na-achaghị acha ma ọ bụ nke na-acha odo odo bụ AF ụdị ụdị fluorocarbon, nke a kwadebere ya na ụdị fluorosilicon Debe. Mgbochi...
Ihe na-egbochi ihe mgbochi maka ihe mgbochi anya
Ihe na-egbochi ihe mgbochi maka ihe mgbochi anya [ Anti Fingerprint Ngwọta nkọwapụta] Ụdị: Mmiri mmiri mmiri na-achaghị acha ma ọ bụ nke na-acha odo odo bụ AF ụdị ụdị fluorocarbon, nke a kwadebere ya na ụdị fluorosilicon Debe. Mgbochi mkpịsị ụkwụ...
Ihu igwe na-eguzogide ọgwụ maka ihe mgbochi anya
Ihu igwe na-eguzogide ọgwụ maka ihe mgbochi anya [ Anti Fingerprint Ngwọta nkọwapụta] Ụdị: Mmiri mmiri mmiri na-achaghị acha ma ọ bụ nke na-acha odo odo bụ AF ụdị ụdị fluorocarbon, nke a kwadebere ya na ụdị fluorosilicon Debe. Mgbochi mkpịsị ụkwụ...
Ihe mkpuchi ihu na-abụghị ndị na-adịghị ọcha maka ihe mgbochi anya
Ihe mkpuchi ihu na-abụghị ndị na-adịghị ọcha maka ihe mgbochi anya [P roduct nkọwapụta] Ụdị: Mmiri mmiri mmiri na-achaghị acha ma ọ bụ nke na-acha odo odo bụ AF ụdị ụdị fluorocarbon, nke a kwadebere ya na ụdị fluorosilicon Debe. Mgbochi mkpịsị ụkwụ...
Enweghi oghere AF maka ihe mgbochi anya
Enweghi oghere AF maka ihe mgbochi anya [P roduct nkọwapụta] Ụdị: Mmiri mmiri mmiri na-achaghị acha ma ọ bụ nke na-acha odo odo bụ AF ụdị ụdị fluorocarbon, nke a kwadebere ya na ụdị fluorosilicon Debe. Mgbochi mkpịsị ụkwụ na-enwe mmetụta dị mma na...
Mpempe mmiri na-ekpuchi AF maka ihe mgbochi anya
Mpempe mmiri na-ekpuchi AF maka ihe mgbochi anya [ Anti Fingerprint Ngwọta nkọwapụta] Ụdị: Mmiri mmiri mmiri na-achaghị acha ma ọ bụ nke na-acha odo odo bụ AF ụdị ụdị fluorocarbon, nke a kwadebere ya na ụdị fluorosilicon Debe. Mgbochi mkpịsị ụkwụ...
Nano mkpuchi na-eguzogide ọgwụ maka ihe mgbochi anya
Nano mkpuchi na-eguzogide ọgwụ maka ihe mgbochi anya [ Anti Fingerprint Ngwọta nkọwapụta] Ụdị: Mmiri mmiri mmiri na-achaghị acha ma ọ bụ nke na-acha odo odo bụ AF ụdị ụdị fluorocarbon, nke a kwadebere ya na ụdị fluorosilicon Debe. Mgbochi mkpịsị...
China Nano Na-ekpocha Maka Anya Anya Ngwa
Igwe ihe nkedo anya anya bụ mkpịsị aka mgbochi, enweghi mmetụta mmanye, ọ naghị emetụta ọdịdị elu ahụ, dị mfe iji, ọ dịghịkwa mkpa ka a kpochara ya.
Ọkụ na-eguzogide ọgwụ. Anya anya oghere mgbochi mkpuchi ụlọ ọrụ debugging usoro:
1. Jiri nyocha anya na mmanya ma ọ bụ ultrasonic.
2. Ghichaa mmanụ mgbochi ahụ n'elu ákwà dị ọcha, jiri nwayọọ mee ya n'elu iko ahụ, dozie ya maka 0.5-1 nkeji, banye na oven maka minit 150 na minit 30, hichaa ntụ ntụ n'elu n'elu mmanya, mma, ị nwere ike Ọ bụ.
3. O nwekwara ike ịhapụ ya n'ime ụlọ dị ọcha maka nkeji iri atọ na-enweghị nnu, wee jiri mmanya na-aba n'anya na-ehicha ya.
Mgbochi aka mkpịsị aka Ogbugbu Ịgba Glass Eyeglass Lens Coatings Anya nlekota anya Mgbochi Nkwado Mkpịsị Aka